DHAGEYSO:-Cabdulqaadir Siidi “Walaalaheena Amisom Wey Ku Go’een Weerarka Alshabaab Ku Qaaday Janaale” | Voice Of Somalia
C/qaadir Siidii sheegta inuu yahay gudoomiyaha Sh/hoose ee DF iyo maamulka Koofur Galbeed ayaa qiray in ciidamada shisheeye ku dhamaadeen weerarkii xooganaa ee ka dhacay degmada Jannaale.
Wuxuu sheegay in Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay weerarka ku bilowday qarax weyn, kadibna uu dhacay dagaal ay ku go’een sida uu yiri’ askarta Uganda.
“Waan u tacsiyeeneynaa walaalaheen amisom ee ku dhintay, kuwii ku dhaawacmayna waxaan leenahay Allaah shaafiyo” ayuu yiri’ C/qaadir Siidii, oo intasi ku daray in waayihii u dambeeyayba uu arkayay in Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab sii laba jibaartay dagaaladeeda.
Jabka soo gaaray ciidamada shisheeye ayuu u sababeeyay in DF aaney kasoo bixin kaalintii wada shaqeeneyd ee kala dhaxaysay, haddey ahaan lahayd iney ciidamo Soomaali ah geeyaan degmooyinka ay shisheeyuhu qabsadeen.
Wuxuu sheegay in ciidamada AMISOM ay ku hoobteen weerarkii Janaale isagoo adeegsiyaday Erayga “Way dhamaadeen”,isagoo sii hadlayay ayuu yiri “Ciidamada walaalaheyna Uganda way ku dhammaadeen weerarkii shalay”.
Taliyaha Ciidamada Uganda oo safar qarsoodi ah ku yimid Muqdisho